Moa ve ny media dia miara-miasa amin'ireo mpanoratra mpanoratra ary moa ve izy mivarotra ny asa nataon'i PsyOp tahaka ny ataony amin'ny fahitalavitra? : Martin Vrijland
Filed in NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	amin'ny 15 May 2019	• 11 Comments
Izay rehetra nanaraka ny raharaha Anne Faber ary vao haingana no nahita ny tranga Julie van Espen tany Belzika tamin'ny vaovao dia tsy maintsy nahamarika fa misy toe-javatra mitovitovy amin'izany. Raha manaraka ny fampahalalam-baovao isika, ity vaovao ity dia fahamarinana fotsiny. Raràna amin'ny sary izay manamarina ny maha-azo itokiana ary tsy mahita fianakaviana sy namana fotsiny isika, fa mahita sary sy lahatsary tena misy ihany koa isika, izay midika fa tsy afaka ny ho hafa noho ny marina izy io. Amin'ity lahatsoratra eto ambany ity dia hiezaka aho hanazava ny antony mbola tsy maintsy hikapoka ny lohanao.
Fampidirana fohy voalohany.
Renay ny troll 'factory troll' na 'troll army', saingy izy ireo dia any Rosia (miteny amintsika ny media). Na izany aza, ny zavatra niainako dia ny hoe ireo miaramila troll ireo dia any Holandy. Tsy mahita an'izany intsony aho amin'ny valinteniko, satria manasitrana azy ireo aho amin'ny fampiasana sivana amin'ny tenimiafina. Aoka hotenenina fa rehefa miasa ny Sampan-draharahan'ny PsyOp (fikarakarana ara-psikolojika) sy mivarotra izany mahomby 'manerana ny sisintany' (satria tsara ho an'ny fireneny), mila milisy troll ianao mba hahazoana ny valim-panontaniana amin'ny sehatra rehetra sy ny adihevitra an-tserasera ao amin'ny sosialy media "hanaraha-maso". Afaka mandefa ny adihevitra izy ireo amin'ny alalan'ny fanehoan-kevitra toy ny hoe "fantatro izy" na "niaraka tamin'ny namako tao amin'ny birao" izy ary fanehoan-kevitra hafa.
Ny olona matetika dia tsy manamarina hoe iza avy ny profil Facebook dia ao ambadiky ny valiny. Tsy voatery ho sary sandoka foana izy ireo; izay mety ho olona tena misy koa.
Mety efa nandre momba ny teny hoe Inoffizieller mpiara-miasa ianao. Teo ambanin'ny Stasi an'ny DDR Atsinanana Alemana, ireo mpiasa mazoto sy miafina izay nanara-maso ny mpiray monina aminy. Voalaza fa iray isaky ny dimampolo izany. Mety mino ianao fa nanjavona tsy ho eto ambonin'ny tany intsony io trangan-javatra io taorian'ny fampidirana ny Atsinanana sy Alemana Andrefana. Tsy azoko antoka izany. Tsy milaza aho - raha jereko ny zavatra niainako tamin'ny valinteny rehetra nandritra ny taona maro - fa manana tafika goavana goavana i Holandy ary vonona ny hitarika ny fifanakalozan-kevitra amin'ny media sosialy ho an'ny soratra maodely iray.
Fantatrao ve fa manana ny ANP i John de Mol? Fantatrao ve hoe nanan-karena i John de Mol? Amin'ny ankapobeny, amin'ny alalan'ny fivarotana fahitalavitra mahomby. Fantatrao avy amin'ireo fampisehoana ireo ny Talenta Holandey any Hollande. Avy eo izy ireo dia misedrana ireo olom-pirenena Holandey vitsy an'isa ary raha mitazam-potsiny izy ireo, dia amidy amina sisin-tany izy ireo ho toy ny hevitra ary tsara karama. Tamin'ny vanim-potoanan'ny Zaons vloggersrel, azoko sary an-tsaina (noho ny sary natolotry ny namana iray izay nipetraka tany amin'ny manodidina) ny fomba nampiasana mafy an'i Powned tamin'ny fikarakarana ny vloggersrel tanteraka. Nanjary nazava fa nisy ny tari-dalana. Mazava ihany koa fa, ohatra, nisy fisamborana iray be dia be, satria tsy maintsy nandeha tamin'ny toerana tsara ilay mpilalao sarimihetsika. Fotoana fohy talohan'izay, ireo lehilahy izay niady hevitra teo anoloan'ny fakantsary dia nihomehy nihomehezana sy nifamihina. Nopotehina tanteraka ny zotram-pianakavian'i Zaanse ary notarihina mivantana. Ireo sary ireo azonao atao eto jereo indray.
Matetika aho no niresaka momba ny teknika izay ahafahana mamorona endri-tsoratra lalina. Te-hamerina izany ho an'ireo mpamaky vaovao aho. Ny Deepfakes dia natao amin'ny alalan'ny rindrambaiko GAN. Izany no rindrambaiko manan-tsaina, izay, miorina amin'ny rafitra maro ao amin'ny AI ao anaty tambanjotra iray, dia mamorona endrika avy amin'ny tsy misy. AI dia Anglisy ho an'ny Intelligence; inona no dikan'ny fahagagana amin'ny artificial. Ny tambajotra AI hafa dia mandinika ireo sary noforonin'ny tambajotra voalohany ary mandà na mankato azy ireo. Amin'ny fanatanterahana izany amin'ny tsingerintaona dia tonga saina kokoa ireo olona ireo amin'ny dingana tsirairay, mba hahafahanao mamorona olon-tsotra tanteraka izay toa tahaka ny olon-tsotra (izay mety hihaona eny an-dalambe fotsiny). Nandritra ny taona maro, ny indostrian'ny horonantsary dia nahavita namorona tarehintsoratra tsy misy, ny NVIDIA mpandrindra ny sarimihetsika dia nanome antoka fa afaka manao izany amin'ny PC ianaojereo eto). Ny orinasa iray ihany (NVIDIA) dia afaka mamorona sehatra virtoaly. Jereo ny horonantsary etsy ambany ary manohy mamaky teny.
Ankehitriny koa dia misy rindrambaiko eny an-tsena izay ahafahanao manome valin-teny mivantana avy ao ambadiky ny webcam eo amin'ny solosaina mahazatra ary mametraka ny endrika sy ny feo hafa momba izany. Izany dia atao amin'ny fotoana tsy misy ary tsy misy fanelingelenana. Azonao jerena eto ity (vakio ny lahatsary).
Raha ampidirinao daholo ireo loharano rehetra ireo, dia azonao atao koa ny mamorona olona tianao, ary azonao atao koa ny manangana tantaram-piainana ary manao toa azy rehetra tahaka izao. Ohatra, ohatra, azonao atao ny mamorona lahatsary iray avy amin'i Anne Faber taona vitsy lasa izay, miaraka amin'ny rainy ao anaty fiara, ary ny rehetra dia mino fa tena izy izany. Sa mety hoe tsy misy fitsapana mihintsy, fa fotsiny inona no mitranga amin'ny fampiharana? Azonao jerena ve io? Afaka matoky isika fa ny governemanta sy ny media dia tsy mamoaka vaovao tsy marina ary azontsika inoana fa ny teknika fikarakarana miafina dia mivoatra teknika mba hitadiavana lalina lalina, fa izy ireo ve tsy mpamokatra lafarinina toy izany ihany?
Noho izany raha toa i John de Mol, mpandova ara-bola, mpamokatra TV lehibe ary tompon'ny ANP (General Dutch Press Agency) dia mety hanana ny fitaovana rehetra ary tokony ho raisina ho toy ny fiterahana lalina lalina, dia tokony hihomehy isika rehefa misy olona miseho moa ve ianao manondro fa misy ny mety hahatonga antsika ho voafitaka? Ankoatra izany, dia nampiseho azy imbetsaka (satria tsy nampiseho fihetsiketsehana aho fanohanana amin'ny fitaovam-maso Nofitahinay izahay). Mety ho sarotra tokoa ve ny hamoahana an'io scripty io toy ny fampisehoana fahitalavitra lehibe iray, satria efa hita fa mahomby izy io?
Nahoana izy ireo?
"Eny, fa Vrijland, tsy maintsy misy tanjona ny hamitaka ny vahoaka amin'ny ankapobeny? Iza no manao izany?"Avy eo dia tokony handinika ny lalàna vaovao napetraka, fotoana fohy taorian'ny tranga lehibe tahaka an'i Anne Faber. Tao amin'ny lahatsoratra maromaro no nanoritsorako ny antony nahatonga ny raharaha Anne Faber (izay i Michael P. no nanao azy io) dia mety ho PsyOp (fiasa ara-tsaina). Asa iray hanosika lalàna bebe kokoa. Fanambarana fa tsy hanaiky velively amin'ny toe-javatra mahazatra ny olona. Noho izany dia tsy maintsy nisy zavatra tsy maintsy nitranga tamin'ny fomba mazava.
Olana, fihetsika, vahaolana
Avelao aho hanomboka amin'ny fanazavana indray ny fomba ahafahan'ny fampahalalam-baovao hilalao ity lalao PsyOp ity sy ny an'ny Olana, fihetsika, vahaolana Ny fara-tampony dia tahaka ny hoe ampiharina indray ny fotoana sy ny fotoana ary avy eo dia hahita ny zavatra hitantsika ao amin'ny raharaha Julie van Espen sy Steve B..
Dia inona izany Olana, fihetsika, vahaolana? Ny zavatra ataonao amin'ny governemanta dia izao: Mamorona olana sosialy misy fiantraikany lehibe ianao (olana) dia maneho fihetseham-po mampihetsi-po lalina eo amin'ny vahoaka (fanehoan-kevitra) ary afaka mametraka lalàna sy fepetra vaovao izay tsy azo ekena velively (vahaolana). Manao izany amin'ny teny toy ny hoe "Ny governemanta dia tsy nahavita niaro ny fiarahamonan'ny fiarahamonina", Vao tonga vao haingana avy amin'ny minisitra holandey Sander Dekker.
Afaka miasa miaraka amin'ireo teknika voalaza etsy ambony ianao mba hamoronana olana toy izany. Raha ny tena marina, midika izany fa tsy afaka manandrana na oviana na oviana na oviana na oviana na oviana na oviana na oviana na oviana na oviana na oviana na oviana ny resadresaka, teny na sary. Noho izany dia tsy afaka mino ny masonao intsony ianao. Ny televiziona sy ny haino aman-jery hafa dia afaka mamelona aina amin'ny olona tsy misy. Na dia mihevitra ianao fa voarakitra amin'ny finday ary na avy amin'ny fakantsary fiarovana aza, tsy azonao antoka fa tena izy io. Azo atao ny zava-drehetra ary tsy misy zavatra tsy azo atao eo amin'ny tontolon'ny media. Tokony handinika tsara foana ianao vahaolana manaraka taoriana kelin'ny hetsika lehibe toy izany.
Fanontaniana marihitra ao amin'ny raharaha Anne Faber
"Nefa Vrijland, mety ho nitranga tokoa ve ny famonoana an'i Anne Faber?"Eny, azonao atao, ao anatin'ny andian-dahatsoratra izay nosoratako momba izany (jereo eto) Nanjary nazava fa lasa tantara tsy dia mahagaga izany. Izay zatovovavy tonga amin'ny bisikileta hanombohan'ny tondra-drano mialoha ary avy eo dia manomboka mamakivaky lalan'ny ANWB ary nahoana ny palitaony no hita tamin'ny 3 Oktobra ary noraisiny andro 6 ho an'ny lalao ADN miaraka amin'i Michael Panhuis ho tanteraka? Tsy tsotra izao izany. Ny NFI dia afaka manao izany miasa amin'ny ora 6. Nahoana i Michael no namelabelatra ny zavatra hita rehetra manodidina ary ahoana ny momba azy? scooter ride miaraka amin'i Anne Faber? Nahoana no nandevenana aloha izy ary avy eo nodorana ary avy eo indray to be buried? Nahoana no nitatitra tatitra momba ny ady an-trano sy ny otopsy tsy hita ao amin'ny raharaha fitsarana? Tsara ihany koa, ary maro hafa koa ny mahatsikaiky momba an'io tranga io, saingy noho ianao nahita ny sarin'ny ray aman-dreny mampihetsi-po dia efa nino anao izany. Ny tantara mampihetsim-po sy ny harena sarobidy (olana) dia nisy fiantraikany teo amin'ny vahoaka tamim-pihetseham-po tokoa izany ka tonga tao amin'ny fanehoan-kevitra mba hanaiky ny lalàna vaovao (vahaolana). Azonao atao izao ny zanakao mitranga amin'ny tenanao koa:
Dekker dia miantso azy io ho 'tsy tiana' izay ahiahiana izay mila fitsaboana ao amin'ny TBS izay afaka mandositra amin'ny tsy fiaraha-miasa amin'ny fanadihadiana ary tsy afaka hitranga intsony izany.
Ankoatra izany, ny fanombanana ny risika fototra sy ny fanadihadiana momba ny heloka bevava dia tsy maintsy atao. Ireo loza ara-tsosialy rehefa lasa zava-dehibe kokoa ny fanomezana fahalalahana ho an'ireo voafonja.
Raha fintinina dia lasa mandika ny fikarohana ny fanjakana psycholojika ary mieritreritra an'i Michael Panhuis isika ary noho izany dia resy lahatra isika fa ilaina izany. Ny zava-misy ho an'ny olom-pirenena marobe dia mety midika fa hametraka ny fanjakana ho an'ny fiainana izy ireo (ka hamoy ny zon'ny olombelona rehetra), aorian'ny fandinihana ny fanadihadiana tsy maintsy atao, dia midika fa izay rehetra maniry ny hanamalalaka ny fanjakana dia dia azo lazaina. Ka noho izany ny fanjakana polisy.
Ny trangan'i Anne Faber sy Michael P. dia toy ny ora iray ao anatin'ilay rivotra ary toy ny niparitaka be ny tantara tamin'ny fiaraha-miasan'ny fitsarana, ny fampahalalam-baovao ary ny mpanao politika mba hanosika tsotra izao lalàna vaovao izao. tsy ho eken'ny olona velively. Amin'ny filalaovana ny vahoaka am-pihetseham-po, ny vahoaka dia resy lahatra fa manohana ny fiovan'ny lalàna toy izany, satria ny rehetra dia mampifandray azy amin'i Michael P.
Ny haino aman-jery dia naharesy lahatra anay fa marina daholo izany, saingy tsy ho afaka hanamarina izany mihitsy izahay ary tsy maintsy mihevitra isika fa tsy milalao miaraka amin'ny teknikan'i Hollywood. Ny vokatr'izany dia azon'ny olona atao ny miala amin'ny sivily tsy amin'antony ary mety hanjavona ao anatin'ny fahatsapany ny fiainany, satria tsy miaro azy ireo intsony ny lalàna.
Ary ahoana ny amin'i Julie van Espen sy Steve B.?
Ny zavatra nipoitra avy hatrany tao amin'ny famaritan'i Steve B. dia lahatsoratra manaraka vrt.be:
Araka ny vaovao azonay, ireo sary dia mety ho sary nalaina tamin'ny tombontsoan'ny fanadihadiana alohan'ny nizarana azy ireo ho toy ny tatitra fanadihadiana (jereo ny sary etsy ambany, navela ny sary photoshop - raha ny marina ny sary fakantsariny). Ny polisy dia nahafantatra avy hatrany fa tsy "vavolombelona" fotsiny izy.
Nahoana ny polisy no "nanaisotra ny sobika izay nentin'i Steve B." tamin'ny tombotsoan'ny fanadihadiana? Azonao atao ny milaza fa nanao izany izy ireo mba tsy handràra ny vavolombelona rehetra, saingy azonao lazaina ihany koa fa efa fantatr'izy ireo fa i Steve B. dia mety hampifandray an'i Julie tsy hita popoka satria nandehandeha izy . Azonao atao ihany koa ny milaza hoe: eto dia ahitantsika ny porofo velona momba ny fomba mora entina sary ary hita eto koa ny porofo fa mitranga izany.
Ny tena mahavariana dia ny hoe tsy io no rain'ilay niharam-pahavoazana, fa ilay raikely. Tao anatin 'ny tranga Anne Faber dia nahita dadatoanay iray izay niteny voalohany. Tatỳ aoriana vao nanomboka ny ray aman-dreny. Tsy mitsahatra manondro ny safidin'ny fonosana sy mpilalao sarimihetsika aho, izay ahafahan'ny sary manodina mivantana ary ny tarehimarika vaovao dia mora azo atao ao anaty tafatafa (tafiditra ao anatin'izany ny horonam-peo). Ny tafiky ny media sosialy dia vonona hiteny "Namana na fahalalana momba izany izy."Mampiaiky ny vahoaka hanaparitaka ny fisalasalana farany.
Ao amin'ny fikarohana an'i Julie, antso an-tariby lehibe koa dia natao ho an'ny fikarohana olom-pirenena. Mety ho ny fiantraikany ara-tsosialy eo amin'ny fiaraha-monina izany ary ny hampifantoka ny sain'ny olona amin'ny raharaha. Mazava ho azy fa toa efa nisy fanolanana efa ela ihany koa io mpangalatra io ka noho izany dia azonao atao ny maka azy ho azo antoka fa eto isika Olana, fihetsika, vahaolana jereo ny asa atao, miaraka amin'ny lalàna vaovao (na any Belzika) fa ny olona rehetra dia afaka mihazona mandritra ny fotoana lava na manery fitsaboana aretin-tsaina (na ny mpitsabo sembana no mihevitra izany na tsia). ny Standaard.be tatitra:
"Nanameloka ilay voampanga ho sazy an-tranomaizina mandritry ny efatra taona noho ny fanolanana sy ny halatra." Izany no nahatonga azy roa taona lasa izay, tao amin'ny 30 June 2017, tao amin'ny Fitsarana Anivohitr'i Antwerp. Kanefa i Steve B. dia tsy nandeha am-ponja tamin'io andro io. Nangataka ny fisamborana azy avy hatrany ny mpampanoa lalàna, saingy tsy namaly izany ny fitsarana.
B. nanintona ny fatokisany ihany koa. Vokatr'izany dia tsy nifarana izy ary nijanona malalaka izy mandra-pitsarana azy.
Nanambara ny nenitoa iray fa, noho ny aminy, dia navoaka tao anatin'ny fepetra sasany izy. "Tonga niresaka tamiko ny mpitsabo aretin-tsika," hoy ilay vehivavy, izay te hitoetra tsy mitonona anarana. "Tsy nahita an'i Steve ho heloka bevava izy. Io zazalahy io dia mila fanampiana fotsiny, hoy izy. Ary raha azontsika homena azy izany? Izany no nataonay. "
Amin'izany ianao dia efa afakavahaolana"Reading. Azo inoana fa aorian'io tranga io dia ho resy lahatra ny olona fa hifarana ny famotsorana azy ary ny mpitsara (tsy mihoatra ny, fa 1 ihany) dia tsy maintsy mitsara raha tsy misy olona tokony hidirana ao amin'ny toeram-pitsaboana. Ny lalàna toy izany dia mety hisy fiantraikany eo amin'ny tsirairay avy ny tebitebin'ny fihetseham-po mampihetsi-po izay noraisin'ny olona ao amin'ny tranga PsyOp (ahiana).
Valio ny fanontaniana ao amin'ny lohateny
Ho an'ilay fanontaniana avy amin'ilay lohateny hoe "Moa ve ny media dia miara-miasa amin'ireo mpanoratra mpanoratra ary moa ve mivarotra ny hetsika nataon'i PsyOp toy izany amin'ny fandaharana amin'ny fahitalavitra?", Ny valiny dia mety ho JES. Mazava ho azy fa misy olona vitsivitsy miaraka amin'ny dibera eo an-dohany, fa ankoatra ireo olona ireo dia manana karama mahavariana na afaka miantso ny tenany ho mpandalo miliara ary mankafy ny tadiaviny rehetra. Tsy fantatrareo; Tsy afaka manamarina izany ianao; Tsy afaka ny hifikitra ny rantsan-tananao ianao raha tsy misy olona mitsangana sy mampiharihary ny zava-drehetra avy ao anatiny. Na dia izany aza, ny vintana hitrangan'izany dia tsy dia misy loatra, satria mety ho mainty ny mpandray anjara. Ankoatr'izany, ny faritra rehetra amin'ny sération psychologique dia mety ho toy ny fisaraham-bazana izay maro no tsy mahafantatra fa anisan'ny scripty PsyOp.
Ny ady an-tsokosoko Ismail Ilgun dia fihetsika tsotra natao handrarana ny sarimihetsika an-dalambe
Fanamarihana fa tranokalan'ny fampahalalam-baovao lehibe ny fanoherana
Tags: ai, ANP, de, deepfake, deepfakes, alika, Featured, horonan-tsary, horonam-peo, sarimihetsika sarimihetsika, Gan, John, Mo, hetsika, asa, mpamokatra. psyop, ara-tsaina, teny, rindrambaiko, ny, tv, mihifikifi
16 May 2019 amin'ny 06: 52
Ohatra hafa amin'ny PsyOp, Thijs H.
Ary iray hafa eto:
(tanjona: ny fitaovam-piadiana rehetra dia tsy maintsy aterina, anisan'izany ny hazo mitsivalana)
16 May 2019 amin'ny 06: 54
Mbola vaovao ratsy ihany ve ny fanamarinana ny lalàna efa napetraka?
John.s nanoratra hoe:
16 May 2019 amin'ny 14: 04
Ahoana ny hevitrao momba izany, ny kilasy voalohany PsyOp:
17 May 2019 amin'ny 13: 22
Tena tantara hafahafa indray izany, fa i Sam G aza dia nijanona nandritra ny telo andro mihitsy aza! Avy eo dia efa nipoaka mafy ilay baomba ary fantatr'ilay mpamboly natahotra azy izany, tsy misy fomba hafa, tokony ho nampahafantarina izany.
Ary ankoatra izany dia mbola mahazo ny trano fisakafoana vaovao amin'ny varavarana rehetra sy ny toy izany ary izy koa nanana bokotra fanairana
Manao vola be ny olona, ​​efa hitantsika izao
16 May 2019 amin'ny 14: 07
Ny tranonkalan'ny RtvUtrecht dia namoaka vaovao vao haingana an'i PsyOp. Mafy aminy izany ary miezaka mitarika ny mpamaky.
16 May 2019 amin'ny 19: 07
Tena tsara ilay lahatsoratra.
Ny fehezanteny farany indrindra dia tena manan-danja tokoa.
Ny matetika hita eto amin'ity tranonkala ity dia lahatsary misy mpihatsaravelatsihy izay mahatonga ny olona hino fa misy lemon-tsiranoka toy ny mangomanga mamy na zavatra mitovy.
Fantatr'ilay mpihina hypnotista fa tsy marina izany, fa ny mpihina hino dia tena hino fa mihinana mangomanga mamy izy ary hanohy hitaky fa mihinana mango mamy satria tena mino izy fa
Ho an'ny rafitra, ireny dia "idiotsiana mahasoa" azo ampiasaina.
Noho izany dia manana ny hypnotista sy ny hypnotized na ny marika roa.
17 May 2019 amin'ny 10: 02
Tsara ny mamaky fa hijanona mandritra ny fotoana fohy ianao, mihelina haingana ireo zavatra ankehitriny mba hahitana mazava tsara ny zavatra hitranga izay miandry antsika.
Tsy tanteraka ny lohahevitra fa tsy maintsy atao izany, io tovolahy io dia milalao sy miaina eo amin'ny sehatra misy azy, ny fitenenana toy izany.
Isiraely manamboatra izao tontolo izao, tsy maintsy sahy fotsiny ianao.
Karel Reuterz nanoratra hoe:
17 May 2019 amin'ny 10: 28
Eny, mino izany marina tokoa aho. Ireo parazita tsy manan-kalem-pahefana amin'ny herinaratra dia tsy saro-kenatra na inona na inona.
Voasoratra ny tantara an-kira, ny boky dia niniana noporofoina ary navoaka (horonan-tsary mifandraika)
Mora tokoa ve izany? mba hanoratana ny sora-baventy ho an'ireo lalàna manan-danja manohana ny fahefana. Mihamitombo betsaka ny vondrona, izay manilika ny tantaran'i Faber ho toy ny vaovao sandoka.
minitra 1-12.47 ao amin'ity doc doc super >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Ny adiresy ankehitriny dia teo afovoany atsinanana ary na dia misy aza ny zava-mitranga amin'izao fotoana izao, ny fifanakalozana
ny fampahalalana dia mora kokoa sy mahomby kokoa amin'ny fanampiana gadget teknika isan-karazany ary mbola olona
any amin'ny faritra samihafa manerana izao tontolo izao dia manana fahasamihafana hafa momba ny iza iza no miady ??? .......... iza ireo antoko mandray anjara? ............... ..
Noho izany, raha azo atao ny mamitaka ny olona momba ny hetsika izay mitranga eo imason'izy ireo, tena mora kokoa ny mamitaka azy ireo momba ny zavatra 100 fahatelo taona maro lasa izay.
JHONNYNIJHOFF@GMAIL.COM nanoratra hoe:
17 May 2019 amin'ny 23: 51
020 msm manafina! vaovao diso
22 May 2019 amin'ny 21: 17
Miala tsiny fa ny ampahany amin'ny sarimihetsika sandoka dia naseho tamin'i Putin. Ity misy iray hafa, fa avy amin'ny fampahalalam-baovao mahazatra:
Miadana ve ny olona amin'ny fahitalavitra?
12 June 2019 ao amin'ny 19: 29
Daty mahafinaritra 9-11 Journaal Nederland
Ny faha-iraika ambin'ny folo, mety angamba koa pSY-OPP? Izany Heineken naka an-keriny, soratra tsara
Ary ankehitriny, ny pleps dia afaka mametraka fanontaniana momba ilay mpilalao Holleeder ao amin'ny Parool, mahafinaritra
« Fotoana hanesorana ity tranonkala ity? UPDATE 15-05-2019
Tsy misy ny fahamarinana fara-tampony? »
Total visits: 16.030.253
Ny virus virus ('Wuhan virus') dia manana patanty amin'ny teny anglisy: isa ny EP3172319B1
Ny tanora ankehitriny dia maniry ny hameno ny toby fanabeazana indray (gulags) miaraka amin'ireo mpihena ny toetrandro
Ny coronavirus avy any Chine dia manome ny alibi tonga lafatra amin'ny adidy vaksiny maneran-tany
Ny Libya dia manome fanazavana momba hoe iza avy ireo firenena any Eoropa no ho voalohany entin'i Turkey
Ny lehilahy Transgender dia miteraka ny zanaky ny mpiara-miasa amin'ny varotra tsy roa lotra miaraka amin'ny mpamatsy vola ho an'ny vehivavy
Fakafakao op Ny virus virus ('Wuhan virus') dia manana patanty amin'ny teny anglisy: isa ny EP3172319B1
guppy op Ny virus virus ('Wuhan virus') dia manana patanty amin'ny teny anglisy: isa ny EP3172319B1
ZalmInBlik op Ny virus virus ('Wuhan virus') dia manana patanty amin'ny teny anglisy: isa ny EP3172319B1
Riffian op Ny virus virus ('Wuhan virus') dia manana patanty amin'ny teny anglisy: isa ny EP3172319B1